कहाँ हराए २९० जना ?
कहाँ होलान् झक्कुप्रसाद खत्री ?
अमर भेटिएनन् : लौ न खोजी गरौं
मुकेश : ‘होटलभित्र पुरिएको हुनुपर्छ’
अस्पतालबाटै हराइन् बेलुमाया
बाआमाको प्रश्न : दाजु भेटियो ?
धरहराबाट साथ छुट्यो
कहाँ गए अनुष्का र रेशमी ?
कहाँ होलान् सुरज ?
काठमाडौ, जेष्ठ २३ - भूकम्प आएको एक महिना नाघिसक्यो । अझै करिब ३ सय मानिसको अत्तोपत्तो छैन । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो विवरणअनुसार उपत्यकासहित भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूबाट हराएका २ सय १० जनाको अझै पत्तो छैन । बेपत्ता ८० विदेशी नागरिकसमेत जोड्दा यो संख्या २ सय ९० हुन आउँछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी रसुवाबाट ९० जना, काठमाडौंबाट ३६, सिन्धुपाल्चोकबाट २९, गोरखाबाट १८, दोलखा र नुवाकोटबाट सात/सात जना हराइरहेका छन् । भक्तपुर, धादिङ, मकवानपुर, मनाङबाट एक/एक जना हराएको तथ्यांक छ । हराइरहेकामध्ये १९ जना कुन स्थानबाट हराएका हुन् खुलेको छैन । पहाडी र हिमाली जिल्लामा पहिरोलगायत कारणले सर्वसाधारण पुरिएर बेपत्ता भएको हुन सक्ने भए पनि राजधानीमा यति धेरै मानिस कसरी हराए ? नेपाल प्रहरीको ‘मिसिङ पर्सन डेस्क’ का प्रमुख वरिष्…
दरबन्दीबिनै भीभीआईपी सुरक्षा र मर्यादापालक
काठमाडौ, चैत्र २९ - माघमा संविधानसभा भवनभित्र विपक्षी सभासदहरूले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गर्दा दौरा सुरुवाल लगाएका मर्यादा पालकको लस्कर आयो। एकअर्काको हातको साङ्लो बनाएर बसेका ती मर्यादापालक प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका थिए। संविधानसभा हलभित्र त्यो बेला ५ सय जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो। संविधानसभा/संसद्मा मर्यादापालकका रूपमा खटिनेहरूको दरबन्दी नै छैन। 'तत्काल गण, गुल्मबाट झिकाएर बि्रफिङ गरेर परिचालन गरियो,' एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'मर्यादित स्थानमा परिचालन गरिने प्रहरीलाई तालिम दिएरमात्र पठाइन्छ, तर एक/दुई घण्टाको तयारीमा प्रहरी पठाइएको थियो।' प्रहरीले मर्यादापालकहरूको एउटा गुल्म बनाउन दरबन्दी माग गरेको छ। उसले १ सय ५० जनाको दरबन्दी मागेको छ। दरबन्दी स्वीकृत भएपछि गुल्मको कमान्डर प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाको राखिनेछ। 'पहिला पहिला संसद् बैठक बसेका बेला औपचारिकताका लागि मर्यादापालक खटाइन्थ्यो,' मुख्यालयका एक अधिकारीले भने, 'अहिलको स्थिति हेर्दा त सधैं राख्नुपर्ने देखिन्छ।' प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक कमलसिंह बमले दरबन्दी माग गरिएको पत्र…
काठमाडौ, चैत्र २८ - सर्लाहीका अर्जुन कोइरालासहित तीन युवा दुई सातादेखि अध्यागमन विभागको हिरासत कक्षमा छन् । नयाँदिल्ली बस्ने नेपाली दलाल राकेशमार्फत टर्कीको जहाजमा कामका लागि पुगेका थिए । तर त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई दिइएको कागजपत्र नक्कली भएको खुलासा भयो । अनि टर्की विमानस्थलमा एक रात राखी उनीहरूलाई अर्को दिन त्यही जहाजमा नेपाल फर्काइयो । सर्लाहीका कोइराला, सतिशचन्द्र भण्डारी र भक्तपुरका उमेश काफ्लेलाई विना भिसा अर्को मुलुकमा गएको अभियोगमा अध्यागमन विभागले मुद्दा चलाइरहेको छ । ६ महिना अघिमात्र दुबईबाट काठमाडौं आएका कोइरालालाई दलालले टर्कीमा काम गर्ने राम्रो अफर ल्याएकाले उनी त्यसतर्फ जान तयार भएका थिए । तीन महिना अघिदेखि प्रक्रिया पुरा गरेका उनीहरूलाई दिल्लीबाट चेन्नई हुँदै साउदी अरेबियाको सारजहाँ र त्यहाँबाट टर्की विमानस्थलमा अवतरण गराइएको थियो । दिल्ली विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीले केरकार गरेका थिए । त्यस्तै स्थिति तिनले चेन्नई र दुबईमा समेत बेहोर्नुपरेको थियो । 'जान पाइने हो कि होइन, मन दह्रो बनाएर बस्नुपथ्र्यो', अध्यागमनको हिरासतमा भेटिएका कोइरालाले भने, 'साउदीबाट …
दुबई भनेर मोराले सिरीयामा बेचेछ
दुबईमा ब्युटी पार्लरको काम गर्न गएकी युवती ७ हजार डलरमा बेचिएर सीरिया पुगिन् । आफ्नै मिहेनतमा २३ महिनापछि नेपाल आएकी युवतीको कथा
काठमाडौ, चैत्र २३ - संखुवासभाकी २५ वर्षीया रमिला (नाम गोप्य) तीन वर्षअघि संखुवासभामा ब्युटिपार्लर चलाएर बसेकी थिइन् । बिहे गरेको दुई वर्षदेखि नै पतिले यातना दिन थालेपछि माइतीको सहारामा पार्लर खोलेकी उनलाई छिमेकको एउटा दाइले विदेश जाँदा राम्रो हुने सुझाए । आफूले मेनपावरको मान्छे चिनेको बताउने ती छिमेकीले उनलाई ०६९ मा काठमाडौं लिएर आए । राहदानी बनाइदिए । त्यसका लागि उनले ५ हजार रुपैयाँ दिइन् ।
काठमाडौंमा संखुवासभा घर भएका आशिष भनिने केदारबहादुर खड्काले एउटै जिल्लाको भन्दै उनीसँग नजिक भए । आफूले दुबईमा मान्छे पठाइरहेको बताए । माइतीको आडमा बसेकी उनलाई पीडा बुझेझैं गरेर खड्काले पैसा नलिई पठाइदिने बताए । 'लाग्न त ८० हजार लाग्छ, तर तपाईंसँग पैसा छैन भने आएर आवेदन दिनुहोस्, आफ्नै गाउँको चेली हुनुहुँदोरहेछ,' खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भनिन्, 'दयालु रहेछन् भनेर औधी खुसी लाग्यो ।'
०६९ असार पहिलो साता परराष्ट्रबाट राहदानी आएपछि उनीहर…
बलात्कारमा सफाइ धेरै
वकिल र प्रहरीले मुद्दामा राम्रो भूमिका निर्वाह नगर्दा फैसलाहरू पीडितका विपक्षमा पुग्ने काठमाडौ, चैत्र ५ - बैतडीकी पूजा बोहरा बलात्कार प्रकरणमा जिल्ला अदालतले दोषीलाई १३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोक्यो। पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले त्यसलाई उल्ट्याएर सफाइ दियो।
त्यसरी सफाइ पाउने बलात्कार आरोपीको संख्या निकै ठूलो छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदनका अनुसार जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता भएका यस्ता मुद्दामा ३४ प्रतिशतले मात्र सजाय पाएका छन्।
२०७०/७१ मा ७५ जिल्ला अदालतमा २ हजार २ सय ३४ वटा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ७ सय ६३ मुद्दाका ८ सय ८५ जनाले मात्र सजाय पाए। सफाइ पाउने झन्डै त्यसकै हाराहारीमा अर्थात् ५ सय १५ मुद्दाका ६ सय ३७ जना रहे। त्यसमा फिर्ता पठाइएका वा मुल्तबीमा राखिएका मुद्दा ५८ अभियुक्त रहेका ४८ वटा थिए। एक हजार दुई सय एक आरोपी रहेका ९ सय ५६ मुद्दा थन्किइरहेका छन्।
पुनरावेदन अदालतहरूमा पुगेका अघिल्ला वर्षका ३ सय १३ सहित ७ सय ९९ मुद्दामा १ सय ६८ को कसुर कायम गरियो। सदर गरेर र उल्ट्याएर गरी २ सय ५० मुद्दाम…
नेपाली युवती कुन-कुन मुलुकमा बेचिन्छन् ?
विदेशमा नेपाली युवती बेच्ने गिरोहका ७ पक्राउकाठमाडौ, चैत्र ४ - नेपाली युवतीलाई अफ्रिकी र खाडी मुलुकका डान्सबारमा काम लगाउने भन्दै त्यहाँ पुर्‍याएर यौन शोषण गराउने एक गिरोहमा संलग्न एक भारतीयसहित ७ जना पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा ललितपुर इमाडोलका ३४ वर्षीय राजेन्द्र सुवेदी खत्री, काठमाडौं मैतीदेवी बस्ने ३७ वर्षीय सविन भनिने सविनराज मानन्धर, भारतीय नागरिक २७ वर्षीय रियान भनिने तरुण रोजना खनगवाल, काठमाडौं इचंगुनारायणका ३९ वर्षीय ललितराजसिंह सुवाल, मोरङ विराटनगरका २८ वर्षीय सुनील अधिकारी, संखुवासभा आँखीभुईं घर भएका आशिष भनिने केदारबहादुर खडका र धनकुटाका ३० वर्षीय नवीन दाहाल छन्। उनीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो।
सुवेदी र दाहाल यसअघि पनि मानव बेचबिखन मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन्। सुवेदी २०७० भदौमा युवती बिक्रीको आरोपमा समातिएका थिए। उनीसहित ५ जनालाई ब्युरोले नै पक्रेको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन लाख धरौटीमा छाडेको थियो। छुटेपछि पनि उनी फेरि युवती तस्करीमै संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ब्युरो प्रमुख नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)…
हण्डर खाएकी सुनिता
द्धन्दमा बाबु आमा गुमेपछि १३ बर्षको उमेरमा राजधानी पसेकी एक दलित युवतीको कथा, लोग्नेले छाडेपछि दुधेबालिका हुर्काउन उनले गरेको संघर्ष । गेष्ट हाउसका साहु देखी ग्राहकसम्म खुसी पारेकी युवतीको नया जिन्दगी .
सुनिता (२६) को नया“बजारमा उनको चिया पसल छ । डुनोट, केक लगायतका खानेकुरा बेच्न थालेको पा“च महिना भयो । महिला सहयात्री नामको सहकारीबाट ६५ हजार रुपैंया ऋण लिएर यो पेशा सुरु गरेकी हुन् । हालैको बिहान पसल बाहिर पुग्दा उनी ग्राहकलाई सिसाको गिलासमा चिया राखेर दिदैं थिईन् । अरुले खाएको चियाका खाली कप उठाएर भाडा धुने ठाउ“मा लगिन् । हतार हतार ति जुठा चियाका कप धोईन् । अनि हतपत स्कुल जान लागेकी छोरीको कपाल कोरिदिईन् । अनुहार धोईदिईन् । एकैछिनमा उनकी छोरीलाई लिन स्कुलको भ्यान आयो । छोरीको सर्टमा रुमाल भिराउ“दै बोकेर गाडीमा छाडिन् । अनि दौडिएर आएर फेरी चिया र खाजाको अर्डर लिन थालिन् । यसो गरेर दिनको दुई सय देखी ५ सय रुपैंयासम्म फाईदा बसाउ“छिन् । ‘नया“ पसल हो, ग्राहकको मन जित्न समय लाग्दो रहेछ ।’
१३ बर्ष अघि माओवादी द्धन्दमा उनका बुवा आमा बितेपछि उनलाई यहा“सम्म आईपुग्न हण्डर त…
झोला फुटाउँदै सामान चोर्दै
विमानस्थलमा बेथितिकाठमाडौं, माघ २५ - पाँच दिनअघि काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँदिल्ली उडेका एक यात्रुको लगेजबाट ३५ हजार भारतीय रुपैयाँ चोरी भयो। 'इन्डिगो एयर' का यात्रु डिके सिंहले लगेजमा राखेको बि्रफकेसबाट रकम चोरी भएको हो।
काठमाडौं-दिल्ली नियमित आवतजावत गर्ने सिंहले आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चोरी र सामान हराएको हेर्ने शाखालाई जानकारी गराएका थिए। उक्त रकम उनले हातमा नलिई लगेजमा पठाएको विषयमा भने विमानस्थलका सुरक्षा अधिकारीले शंका व्यक्त गरेका छन्। 'त्यो खासै ठूलो रकम त होइन,' एक प्रहरी अधिकृतले भने, 'हातमा बोक्ने झोला वा खल्तीमा किन राखेनन्?'
उनले प्रहरीलाई दिएको जानकारीअनुसार भने ह्यान्डक्यारी झन्डै ९ केजी बराबरको थियो। पाँच केजीभन्दा बढी हातमा बोक्न नपाइने भएकाले उनले लगेजमा पठाइदिएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनको सुटकेसलाई 'इन्डिगो एयर' का कर्मचारीले सुटकेस खोल्ने ठाउँमा सेतो टेपसमेत लगाइदिएका थिए। 'तर पनि नगद हराएको उजुरी छ,' ती अधिकारीले भने, 'अनुसन्धान गरिरहेका छौं।'
दलालले उडाएको सपना
उनीहरूले खाना खान पाउन छाडे । चर्चहरूमा सित्तैमा खुवाइने खाना पाउने आसमा भौंतारिन थाले । तर त्यस्तो पनि फेला पारेनन् ।
कम्तीमा महिनाको ८० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ, पोल्यान्ड पुगेको तीन महिनामा स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र (पीआर) पाइन्छ' करिब एक वर्षअघि चितवनकी दीपा खनाल र सिर्जना चुडाललाई उनीहरूकै साथी गणेश पुरीले 'गतिलो' अफर दिए, 'भिसा नलाग्ने कुरै छैन, हाम्रो युरोपियन दूतावासमा राम्रो सम्बन्ध छ, चिन्ता लिनु पर्दैन ।' नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा भेटिएकी दीपाले भनिन्, 'सुरुमा त मैले हुँदैन भनेकी थिएँ, धेरै कर गरेपछि ऋण खोजेर गएको, पोल्यान्ड पुग्न त अलग कुरो झन्डै ज्यानसमेत गयो ।' प्रतिव्यक्ति दस लाख रुपैयाँ तिरेर गएका उनीहरू ४ महिनापछि नेपाल फर्किए, टिकट काट्न लगाएका गरगहनासमेत बेचेर । न पोल्यान्ड पुगे, न पैसा नै पाए । कसो आफै बेचिएनन् ।
रुपन्देही शंकरपुर घर भएका पुरी र दीपाबीच झन्डै ९ वर्षपहिला चिनजान भएको थियो याहु म्यासेन्जरमा । अनि कपुरधारामा ब्युटिपार्लर चलाएर बसेकी दीपा र पुरीबीच भेटघाट बाक्लियो । त्यस क्रममा पुरीले …
मर्यादा पालकको संख्या ह्वात्तै
काठमाडौ, माघ २२ - संविधानसभाको बिहिबार बस्ने बैठकका लागि प्रहरीले बिशेष सुरक्षा तयारी गरेको छ । बहुमतिय प्रक्रिया बिरुद्ध एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षि मोर्चाले यसअघि गरेको आक्रमण र तोडफोडपछि प्रहरी सचेत बनेको हो ।
प्रहरी उपरिक्षकको नेतृत्वमा १ सय ५० दरबन्दीमा रहेको मर्यादा पालकको संख्या साढे छ सय पुर्‍याइएको थियो । त्यो अहिले पनि निरन्तर छ । तर ति मध्ये २ सय ५० जना 'ब्याक फोर्स' का रुपमा रहनेछन् ।
जब बच्चाको कसम खुवाएर भौचर च्यात्न लगाए
राजधानीमा ट्याक्सी गुडाउँदै आएका ३६ वर्षीय मदन तामाङको मोबाइलमा २५ लाख रुपैयाँ जितेको सन्देश हिन्दी भाषामा आयो । अरूलाई पनि यसरी मोबाइलमा सन्देश अाएर ठगी भएको समाचार उनले कसो पहिल्यै पढेका थिए । त्यसैले वास्ता गरेनन् । केही दिनमा फोनै आयो । कोही उनलाई हिन्दी भाषामै २५ लाख रुपैयाँ चिट्ठा परेको भन्दै बधाई दिन चाहन्थ्यो ।
तामाङले आफूलाई ठग्न खोजेको भन्दै फोन काटिदिए । फेरि फोन आयो । अब फोन गर्ने मानिसले उनको सिमकार्डको 'सिरियल नम्बर' बताउँदै विश्वास दिलाउन खोज्यो । उनले सिम झिकेर पछाडिपट्ट िरहेको सिरियल नम्बर चेक गरे । नभन्दै मिल्यो । 'नम्बर मिलेपछि साँच्चै परेको रहेछ भनेर सपना बुन्न थालें,' उनले प्रहरीलाई सुनाए, 'त्यसको एक सातामै सपना सबै उडेर गयो ।'
दोस्रो चरणमा चिट्ठा राशि पाउन केही रकम पठाउनुपर्ने सूचना आयो । उनलाई एभरेस्ट बैंकको खातामा सुरुमा ४० हजार रुपैयाँ पठाउन लगाइयो । त्यसको केही दिनपछि पुनः ५० हजार रुपैयाँ खातामा हाल्न भनियो । अन्तिम पटक २५ हजार रुपैयाँ मागियो । उनीबाट कुल १ लाख १५ हजार रुपैयाँ लिएपछि सन्देश पठाउने र फोन गर्ने व्य…